नेपालले एकएक इन्च जमीनको रक्षा गर्छः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली - Sero Fero News
Home/sdf/नेपालले एकएक इन्च जमीनको रक्षा गर्छः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
नेपालले एकएक इन्च जमीनको रक्षा गर्छः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
November 16, 2019	sdf Leaveacomment2Views
श्रम र साधना महाकाव्य लोकार्पण
पाल्पा, कार्तिक ३०
नेपालको एक ईन्च पनि भूमी मिचिएको सरकार हेरेर बस्न नसक्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् । शनिबार पाल्पाको तानसेनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मित्रताको नाममा आफ्नो जमीन मिचिएको हेरेर बस्न नसक्ने बताएका हुन् ।
श्रम र साधना महाकाव्यको लोकार्पण गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारत बीचको सीमाको समाधानका लागि कुटनीतिक पहल अगाडी बढाएको बताए ।
हामी तथ्यहरु, प्रमाणहरु राख्छौं । १५ सालमा चुनाव भयो, त्यहाँका मानिसहरुले भोट हाले । ९७ सालमा गौडामा आएर त्यहाँका नागरिकले तिरेका छन्, हामी भन्न चाहान्छौं, मित्रराष्ट्रलाई, हाम्रो कुनै अन्यथा स्वार्थ छैन । मित्रताको नाममा हामीले आफ्नो अधिकारलाई छोड्ने भन्ने कुरा हुन्न, मन्त्री ज्ञवालीले भने, मित्रता र अधिकार दुवै सँगसँगै हुन्छ । नेपाली जनताको चित्त दुखाएर भारतीय मित्रतामात्र भनेर नेपाल सरकार बस्दैन ।
कवि निलकण्ठ न्यौपानेद्वारा रचना गरिएको महाकाव्य श्रम र साधनाको प्रा.डा. वेनीमाधव ढकालले समीक्षा गर्दै १५ शर्गमा शुर ललित पदावलीमा महाकाव्यको रचना गरिएको बताए । प्रा.डा. ढकाल भन्छन्, ‘श्रम र साधना मन, वचन र कर्मलाई सत्कार्यमा लगाउने कृती हो ।’
निलकण्ठ न्यौपानेले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि श्रम र साधनाको आवश्यकता पर्ने बताए । पाल्पाली श्रमवीर र लुम्बिनीका साधनालाई एउटै प्रणयसुत्रमा बाँध्ने श्रम र साधना महाकाव्यको पूर्वखोला गाउँपालिकाले प्रकाशनमा ल्याएको हो ।
Previous लुम्बिनी मेडिकलमा उपचारको क्रममा युवतीको मृत्यु
Next वडाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर शिक्षक बने वडाध्यक्ष